Activities – Page5– မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ်
phone (+95)9770141830
မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် > News > Activities
Four Year Myanmar Result
access_time March 25, 2019
perm_identity Posted by Myingyan Degree College
First Year History Result
access_time March 22, 2019
First Year Myanmar Result
access_time March 21, 2019
access_time March 8, 2019
Student Affair Result 2018
2018 UDE Entry
Computer Dept Share
access_time March 7, 2019
access_time March 6, 2019
ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဟောပြောပို့ချသည့် ”Agenda 2030 and Role of Higher Education Institutions (HELs)” ZOOM Application ဆွေးနွေးပွဲကို ညနေ (၂းဝ၀) ကျင်းပရာမြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များ ဆရာ၊ ဆရာမများ စီမံ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
Myanmar Universities’ Research Conference (2020)သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို (27-6-2020)ရက်နေ့Online ZOOM Application ဖြင့် ကျင်းပရာ မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ စီမံအရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဟောပြောပို့ချမည့်”Professional Ethic for On-Line Education ZOOM Application ဆွေးနွေးပွဲကို ညနေ (၂းဝ၀) ကျင်းပရာမြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)များ ဆရာ၊ ဆရာမများ စီမံ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာပုံစံများကို Online မှ Download ဆွဲ၍လည်းကောင်း မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် သင်တန်းရေးရာဌာနတွင်လည်းကောင်း ရုံးချိန်အတွင်းထုတ်ယူူနိုင်ပါသည်
မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းစနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးဆန်းဝင်းလှိုင် (ဌာနမှူး သင်တန်းရေးရာ)က ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးဟောပြောပါသည်။
Nyaung Oo – Mandalay Road, Myingyan Degree College.
(+95)92215884, (+95)9770141830
Address: Nyaung Oo – Mandalay Road, Myingyan Degree College.
Phone: (+95)92215884, (+95)9770141830
This Week: 463
This Month: 9681
© 2019မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ်. All rights reserved.
Web Develped By Grace IT Software Service Center.